डा. केसी अनशन तेस्रो दिन : सरकारले सहमतिमा चासो दिएन - समाचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २१, २०७४-प्रा.डा. गोविन्द केसीले १३ औं आमरण अनशन थालेको तीन दिनसम्म सरकारले सहमतिको पहल नै सुरु गरेको छैन । केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताभित्र बिहीबारदेखि चार सूत्रीय माग राखी अनशन बसेका छन् । उनमा रिंगटा लाग्ने र मांसपेशी बाउँडिने समस्या देखिएको छ ।
कांग्रेस नुवाकोटबाट १ सय ४३ जना उम्मेदवार सिफारिस ›